कालो पहाड – bisalchautari.com
- २ चैत्र २०७१, सोमबार ०९:५० मा प्रकाशित
levitra tresckow dans quel pays acheter viagra sans ordonnance thesis statement social media addiction how do you add an email account to your iphone7plus civics help homework get link https://scfcs.scf.edu/review/homework-help-geometry/22/ viagra illegal ireland go site viagra time follow url http://jeromechamber.com/event/sampling-techniques-research/23/ follow site see url write report format essay on celebration diwali best essays writers website for mba go see sociology dissertations viagra concord buying custom essay online custom essays source url http://v-nep.org/classroom/i-forgot-to-write-my-essay/04/ science projects layout examples free school report writer thesis acknowledgement examiners https://thejeffreyfoundation.org/newsletter/essay-writing-service-gumtree/17/ https://www.guidelines.org/blog/thesis-binding-on-a-saturday/93/ brand name viagra canada https://heystamford.com/writing/write-dissertation-proposal/8/ sandip rai story kalo pahad
‘जब चामल उम्लिन थाल्यो बाँस्नाले दिमागमा रोमाञ्चकता थप्यो । दाल, भात पाक्नै लागेको थियो । म त्यहाँबाट उठ्न खोजे । तुम कहा जा रहे हो ? सुत्न । वृद्धाले बस भन्यो । फर्किएर बसे । ढकनी र कुच्चिएको थालमा भात पस्कियो । एक भाग म तीर सा¥यो । मे नही खाउगा भने बैसाखी उठाएर झन्नै हिर्कायो क्या वोला तुमने ।’
पञ्जाबको जलाडी बस्तीमा पाईप सप्लाईको काम चलिरहेको थियो । अचानक बिरामी भए । पाईप सप्लाईको काम सकिएपछि साथीहरु अर्को काम गर्न पलामपुर गए । म अचानक अस्वस्थ्य भए ।मेरो स्वस्थ्य झनझन खराब हुदैँ गएपछि अस्पताल भर्ना हुनु प¥यो । अस्पतालको शैयामा अठार दिन विताए । साथमा भएको पैशा अस्पतालमा सकियो । साथीहरुलाई खोज्दै जान सक्ने अवस्था थिएन । अस्पतालले डिस्चार्ज गरेपछि धर्मशालामा गएर बसे ।
पहिलो दिन आफ्नो साथमा भएको भुजिया खाएर कटाए । दोस्रो दिनदेखि साथमा केही थिएन । काम गरौ बिरामीबाट भर्खरै तङ्ग्रिन्दै थिए । साथीहरुसंग सम्पर्क गर्ने कुनै माध्यम थिएन । बाहिरी समाज जस्तै रहेछ धर्मशाला पनि । धर्मशालामा बस्ने मानिसहरुको पनि वर्ग हुदाँरहेछन् । पहिलो पल्ट अनुभव गरे । बलिया बाङ्गा राम्रो ठाउँमा बस्थे । निम्छुराहरु बलेसी तीर । निम्छुराहरुले मागेर ल्याएको खानेकुराहरु बलियाहरुले खोसेर खाईदिन्थे । आफु त झन नयाँ मान्छे त्यसै माथी बिरामीले सिथिल लड्ने भिड्ने कुरै भएन धर्मशालाको एक छेउमा भोकै तीन दिन विताए । खै कहाँ–कहाँबाट धर्मशालामा आइपुग्छन् यति धेरै मान्छेहरु । कुनै–कुनै रातभरी बरबराउँथे । कोही यस्तरी सुत्थे बालक जस्तै । कोही घरी हाँस्थे घरी रुन्थे । बेला बेला लाग्थ्यो यो धर्मशाला नभएर एउटा रंगमञ्च हो । जहाँ कलाकारहरु अभिनय गरीरहेका छन् । तीन दिनसम्म कोहीसंग बोलचाल भएन । निक्कै गाह्रो भइरहेको थियो । विहानीको पारीलो घामले अलिकती स्फुर्ती थपे झै भयो । चउरमा निस्किए । म चउरमा निस्किएको देखेपछि पल्लो कुनामा संधै खोक्दै–खोक्दै बस्ने वृद्वले बोलायो । ओ बेटे इदर आओ । मनमा लाग्यो यो बुढाले पनि हप्काउन थाल्यो । तुमने खाना खाया कि नही ? मैले नही भने उसले भन्यो कब खाओगे ? मेरे दोसलोग कामपे गये हे जब लटेङ्गे तब खाउङ्गा । जाओ पानी लेकर आओ ।
गरिब दिन दुःखी भएपछि, असक्त भएपछि एउटा माङ्ने बुढाले पनि हेप्दारहेछन जस्तो लाग्यो । चुपचाप थोत्रे टिनको भाडामा पानी लिएर आए । उसले दाल चामल केलाउदै भन्यो स्टोप जला । मनमा लाग्यो माङ्ने बुढाको दासी नै भइयो । एउटा सिपाही झै वृद्वले दिएको आदेश खुरुखुरु पुरा गरे । जब चामल उम्लिन थाल्यो बाँस्नाले दिमागमा रोमाञ्चकता थप्यो । दाल, भात पाक्नै लागेको थियो । म त्यहाँबाट उठ्न खोजे । तुम कहा जा रहे हो ? सुत्न । वृद्धाले बस भन्यो । फर्किएर बसे । ढकनी र कुच्चिएको थालमा भात पस्कियो । एक भाग म तीर सा¥यो । मे नही खाउगा भने बैसाखी उठाएर झन्नै हिर्कायो क्या वोला तुमने । परसो से देखरहा हूँ तुम्ने कुछ नही खाया । कालो कुच्चिएको भाडा, नमाझिएको कराई, लामो– लामो नग्रा भित्रको कालो फोहोर र पहेलो दाँत हेर्दै घिन लाग्यो । भोकले त हैरान थिए । दिनभरीको सिकार खाउ भने कान्छा बाबुको अनुहार झै भयो । बाँच्न कै लागी भए पनि खानु पर्ने विबस्ता थियो । सोचे फोहोर नै भए पनि आगोमा उम्लिएपछि किटाणुहरु त नष्ट हुन्छन् । जब पहिलो गाँस अन्नको टुक्रा मुखमा लगाए आँखामा आँशु रसायो । आँखामा छल्किएको आँशु देखेर वृद्व भावुक बन्दै भन्यो बेटा ये दुनियाँ स्वार्थी हे । स्वार्थी दुनियाँमा बाँच्न कति गाह«ो हुन्छ । त्यो त मलाई थाहा छ । हेर्दा त दःुख पाएको मान्छे जस्तो लाग्दैन । सायद बाबु आमालाई ठग्न नेपालदेखि यता आएको होला । खासमा हामी नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गर्नका लागि लडिरहेका योद्धाहरु थियौँ । राज्यले देशद्रोहीको मुद्दा लगाएर वारेण्ट जारी गरेपछि विभिन्न भूमिकामा भारतको गाउँ शहरमा भूमिगत जीवन विताईरहेका थियाँै । मैले वृद्वलाई ढाटे म्याट्रिक दिएर यता घुम्न आएको साथीहरुले धोका दियो । अब यसो खर्च कमाएर घर फर्कने विचारमा छु । जाउ तिम्रै घर जाउ तिमि जस्तो मान्छे यहाँ भूल्ने होईन । यो कालो पहाडमा त मान्छेहरु जहिल्यै तड्पिएर बाँच्नु पर्छ । अङ्ग्रेजहरु त भारतलाई सुनको चरी भन्थे वृद्वले कुन अर्थमा कलो पहाड भन्यो बुझ्न सकिन । गफगाफमै खाना खाइसक्यौँ । वृद्व माग्न हिड्यो । साँझ दुवै भएर खाना पकाएर खायाँै । यसरी धर्मशालाका दिनहरु वित्न थाल्यो । पहिले हेर्दै घिन लाग्ने माङने वृद्व बाबु हो कि बाजे त्यति प्यारो लाग्न थाल्यो ।
हेर वेटा म पनि जवानाको नामी इमान्दार कर्मचारी हु । एक प्रतिष्ठित कम्पनीको डाइरेक्टर थिए । नियतीले धकेलेर सडकमा माग्ने बनायो । एक दिन कम्पनीमा काम हेर्ने क्रममा अचानक खुट्टा जिप्टीएर फित्ताले खुट्टा चुटाई दियो । लङ्गडो भएपछि पहिला औधि माया गर्ने फ्याक्ट्री सञ्चालकहरुले काम गर्न सक्दैनस भनेर निकाली दियो । पहिलेकै जिम्मेवारी सम्हाल्न नसके पनि अरु कुनै जिम्मेवारी लिन सक्थे । सञ्चालकहरुबाट त्यो मूल्याङ्कन भएन । सञ्चयकोष, विमा र क्षतिपूर्ति गरी निक्कै मोटो रकम पाए । सबै रकम चार भाई छोराहरुलाई त्यस समयको पाँच–पाँच लाख बाडि दिए । कालन्तरमा मैले सोचे भन्दा धेरै फरक किसिमले समयले कोल्टो फे¥यो । सबै छोराहरु क्रमशः टाडिन्दै गए । जीवनभर कमाएका पैसा छोराहरुलाई बाडि दिएको थिए । फेरी कमाउन सक्ने सामाथ्र्य थिएन । आफुले त्यति धेरै माया गरेर हुर्काइ, बढाएका छोराछोरीहरुले अपहेलना गर्न थाले । आफ्नो नाममा न जग्गा जमिन थियो न पैसा । त्यहिबाट श्रीमती र मेरो दुरदशा सुरु भयो । अन्तिम घडीमा यस्तो सोचे भावीले मागि खान लेखेको रहेछ ठिकै छ मागेरै खान्छु । मेरो योजना श्रीमतीलाई मात्र भनेर यहाँ आए । औसत दिनको पाँच सय कमाई हुन्छ । सीजनमा दूई हजार पच्चिस सयसम्म हुन्छ । अहिले वैंकमा दुई लाख ब्यालेन्स गरेको छु । पहिले सबै छोराछोरीहरुले हेला गरे अहिले वैंक ब्यालेन्स रहेको थाहा पाएपछि सबै नजिक हुन खोज्छन । वेटा यो दुनियाँ यति स्वार्थी छ । सबैले मलाई लङ्गडो माङने वृद्धा भने पनि श्रीमतीलाई यहिबाट खर्च पठाई रहेको छु । थूप्रै मानिसहरुको भन्दा मेरो कमाई राम्रो छ । जीवन त यसरी पनि चल्दोरहेछ । यसो भन्नुको अर्थ मागेर खानुपर्छ, मागेर जिन्दगी चलाउनुपर्छ भन्ने होइन । म पनि पाखुरा बजारेर दश नग्रा खियाएर पसिनाको मोल खानुपर्छ भन्ने मान्छे । नियतिले मागेर खान विवश छु । यति हो जस्तो परिस्थिति आएपनि मान्छेले पैसाको निम्ति आत्मा बेच्नु हुन्न ।
यसरी धर्मशालामा वृद्वसंग निकट भए । कहिले–काही यति गफ हुन्थ्यो कि वृद्व विहान माग्न जानै भूल्थे । समय वित्दै जाँदा त्यो धर्मशालामा वृद्वको प्यारो म र मेरो प्यारो भए वृद्व । रात परेपछि अनाथ झै धर्मशालाको एकाछेउमा गुटमुटिए सुत्थ्याँै । पन्द्र दिनपछि मलाई खोज्दै साथीहरु धर्मशाला आईपुग्यो । विचरा वृद्वले तिमिलाई माया गरेर खाना दिएछन यो पैशा छाडी राख भनेर एक जना साथीले हजार रुपैयाँ दियो । यो पैसा राख्नुस भनेर दिन के खोजेथे वृद्वले वैशाखी उठाएर झन्डै हिर्कायो । साले मेने ब्यापार किया हे ? जो तुम मुझे पैसे दे रहे हो ? कित्ना पैसे हे तुम्हारे पास ? मुझे खाना नही मिला इसलीए मे मागने के लिए चलाआया । तुम ने खाना नही पाया इसलीए मेने खाना दिया । थोडी ना मेने पैसे के लिए किया हे । मार गाली ग¥यो । मलाई लिन साथीहरु आईसकेका थिए । त्यसैले वृद्वसंग त्यो धर्मशालाबाट विदा हुनु थियो । गह«ौ मनले विदा मागे । धेरै खल्लो लागि रहेको थियो । यस्तो खल्लो कुनै प्रियजनसंग छुट्दा महसुस भएको थिएन । मलाई विदा गर्नुको पीडा वृद्वको चाउरीएको अनुहारमा पनि प्रतिविम्बित भएको थियो । वृद्वले हिड्ने वेला भन्यो । सम्भव भएसम्म चाडो घर जा पैशा छैन भने भाडा लगाई दिन्छु । तेरो अझै केहि गर्ने समय छ । त यहाँ नबस यो कालो पहाड हो ।